အီးမေးလ်စာရင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ Martech Zone
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သွေးအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်း၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသွားသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာကကောင်းသည် အီးမေးလ်ပို့သူများကိုအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများက ပို၍ အပြစ်ပေးသည်။ ISPs နှင့် ESP များသည်လုံးဝအလိုရှိသည်ဆိုပါကပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းနိုင်သော်လည်း၊ ရလဒ်ကတော့ဒီနှစ်ခုကြားမှာရန်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိနေတာပဲ။ အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ (ISPs) များသည်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ (ESPs) ကိုပိတ်ဆို့ပြီး ESP များကိုဖောက်သည်များအားအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးရသည်။
သင်၏အီးမေးလ်များ၏ ၁၀% ကျော်သည်မကောင်းပါက ၄၄% အောက်သာပေးပို့သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်နှစ်ဆဝင်ရောက်ခြင်းကဲ့သို့မလွယ်ကူပါ။ ငါတို့ကဲ့သို့သောဆိုက်များသည်ရောင်းချသူများနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူမျှဝေသည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်ပါတနာများနှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ကိုကျနော်တို့စာရင်းထဲကနေဝင်ရောက်ခွင့်မပေးပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေလုပ်ဆောင်ဖို့အီးမေးလ်လိပ်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြိမ်များစွာစုဆောင်းတယ်။ အဲဒါအကြီးအကျယ်ခေါင်းကိုက်တယ် အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကသင်၏ရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းနှင့်သင်၏စာရင်းစစ်ကိုဂရုမစိုက်ပါ။ သူတို့ကမင်းဟာ spammer တစ်ယောက်လို့ပဲယူဆတယ်။
MailChimp ကဲ့သို့ ESP များသည်ထောက်လှမ်းရေးကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် Omnivore ဟုခေါ်သောစနစ်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာ။ Omnivore နှင့်အတူ Mailchimp သည်သတိပေးချက် ၅၀,၀၀၀ ကိုပေးပို့ပြီးတစ်နှစ်တည်းအတွင်းမှာပင်အကောင့် ၄၅,၉၀၅ ခုကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီအကောင့်တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြှင့်တင်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ကငြင်းခုန်ချင်တာကသူတို့ထဲကအများစုဟာသူတို့ရဲ့စာရင်းထဲကိုပို့ပေးတာပဲ။
ဂျူပီတာသုတေသနအရ အီးမေးလ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် typos, syntax, domain နှင့်အခြားအမှားများပါရှိသည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာအနိမ့်အမြင့်ကိုကျော်လွန်နိုင်သောစာရင်းဟောင်းသို့ပေးပို့ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်၎င်းတို့၏အကန့်အသတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဒါအန္တရာယ်ရှိတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုကြိုးစားဖမ်းယူရန်အတွက်စနစ်များမှတစ်ဆင့် SPAM ထောင်ချောက်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုတစ်နေ့တာတွင်တွန်းပို့နေသည့်စက်များမှဖော်ပြခြင်းမပြုရန်။ ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကတော့သံသယဖြစ်မှုကစပမ်မာကတရားဝင်စာကိုပို့ပေးတဲ့သာမန်ကုမ္ပဏီထက်အီးမေးလ်ကိုသင့်ရဲ့ inbox ထဲကို ၀ င်ဖို့ပိုလွယ်တယ်လို့ထင်တယ်။
အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ပေးပို့နိုင်မှုနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မရိုးသားပါ။ မကြာခဏသူတို့သည်တစ် ဦး ပြကြလိမ့်မယ် 99% ပေးပို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ပုံနှိပ်အီးမေးလ်အနည်းငယ်ပေးပို့ပြီးနောက်ကပြောပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ duh …မမှန်ကန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုပထမဆုံးပေးပို့သည်။ တစ် ဦး အတွက်ပျမ်းမျှလက်ခံမှုနှုန်း ပို့သူရမှတ် 91 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ 88% ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏စာရင်း၏ ၁% သည်မကောင်းမှုရှိခြင်းကသင်၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ၁၀% ကျော်လျှော့ချနိုင်သည်။
ကျေးဇူးတင်စရာရှိပါတယ် အီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးပံ့ပိုးပေးစာရင်း ထောက်လှမ်းရေးကိုစုဆောင်းနှင့်သင်ဤရှုပ်ထွေးသောသို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောမီမတိုင်မီသင်၏စာရင်းရှင်းလင်းဖို့ကူညီလိမ့်မယ်သူကိုစျေးကွက်အပေါ်။ အကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ အီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအီးမေးလ် validation ကို။ အီးမေးလ် validation သည်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားကြောင်းအတည်ပြုသည်။ အီးမေးလ်ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေကိုခန့်မှန်းရန်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
အီးမေးလ်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုသည်အီးမေးလ်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောပေးပို့သူဂုဏ်သတင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်လိုအပ်သောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာအီးမေးလ်စာရင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေ ၄ ခုရှိတယ်
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်း - အကယ်၍ သင်သည်ပံ့ပိုးသူအသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့လျှင်၊ သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းသန့်ရှင်းခြင်းသည်သင်၏အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် IP ပူနွေးလာမှုမဟာဗျူဟာ.
အနိမ့် Inbox နေရာချထား - သင်၏စာရင်းသည် spam ထောင်ချောက်များနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်သင်၏အီးမေးလ်များသည် junk folder သို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။
အနိမ့်ပွင့်လင်းနှုန်း - သင်သည်သင်၏ inbox နေရာချထားမှုနှုန်းကိုတိုင်းတာ။ မရဘဲဖွင့်နှုန်းနိမ့်ကျလျှင်သင်အီးမေးလ်များသည် spam ထောင်ချောက်များနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်၏အီးမေးလ်များသည် junk folder သို့သွားနိုင်သည်။
Re- ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု - အကယ်၍ သင့်တွင်လအနည်းငယ်အတွင်းသင်မပေးပို့ရသေးသည့်စာရင်းရှိပါကသင်၏ပို့ဆောင်နိုင်မှုနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့်တုန်ခါမှုများကိုရှောင်ရှားရန်စာရင်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုပါသည်။
အီးမေးလ်စာရင်းသန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
ဤစာမျက်နှာသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များလာသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပံ့ပိုးသူအားရွေးချယ်ရာတွင်လမ်းညွှန်ချက်အချို့ပေးလိုကြောင်းနှင့်အောက်ပါစာရင်းအားအကြံပြုထားသောနှင့်မသိသောအီးမေးလ်စာရင်းတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသို့အဘယ်ကြောင့်ခွဲဝေပေးသည်ကိုသေချာစေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များသည်အောက်ပါအပေါ်အခြေခံသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတတိယပါတီသို့ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း (သို့) ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုရန်သေချာစေသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒရှိပါသလား။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု - ၀ န်ဆောင်မှုသည်သူတို့၏ဒိုမိန်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ စီးပွားရေးတည်နေရာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ဖြင့်အွန်လိုင်းတွင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမှတ်ပုံတင်ထားသလား။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သီးသန့်ရုံးခန်းတစ်ခုလား (PO Box သို့မဟုတ်မျှဝေထားသောရုံးခန်းမဟုတ်ပါ) လား။
ထောက်ပံ့ - ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့အားအီးမေးလ်၊ အဆက်အသွယ်ပုံစံသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းရှိမရှိနှင့်တောင်းဆိုမှုအပေါ်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှအမှန်တကယ်တုံ့ပြန်ခြင်းရှိမရှိ။
Integrated - အီးမေးလ်လိပ်စာအမြောက်အများကိုပြုပြင်ခြင်းသည်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်သည်သင်၏စနစ်များနှင့်သင်အီးမေးလ်လိပ်စာများစုဆောင်းနေသည့် entry point များအားလုံးကိုပေါင်းစည်းနိုင်လျှင်၎င်းသည်ပိုမိုထိရောက်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
API ကို သင့်ကိုယ်ပိုင် platform များကို၎င်းတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းနိုင်သည့်၎င်းတို့တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ကောင်းမွန်သည့် API ရှိသလား။
လိုက်နာခြင်း - ကုမ္ပဏီသည် GDPR သို့မဟုတ်အီးမေးလ် spam လိုက်နာမှုဆိုင်ရာဥပဒေကဲ့သို့သော privacy စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊
မြန်ဆန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာများကိုမလိုချင်သောသူများအတွက်အီးမေးလ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း။ သင်၏စာရင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ရိုးရှင်းသောအဆင့် ၃ ဆင့်သာ။
အာမခံ 98% + ပေးပို့မှုနှုန်း သင်၏အတည်ပြုအီးမေးလ်စာရင်းနှင့်အတူ။
24 /7လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ကူညီရန်အခြားအဆုံးအပေါ်အစစ်အမှန်လူများနှင့်အတူ။
ဤတွင် ဦး ဆောင်အီးမေးလ်စိစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင်သင်အရောင်းအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်မလိုအပ်သောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုပါဝင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်ဒေတာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များရှိသည်၊
ဤစာရင်း၏တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးချနိုင်သည် အီးမေးလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာ အဲဒါကို inbox ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ ပိတ်ဆို့ခံရခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပါ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ပစ်ခတ်တဲ့၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချ သင်၏အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှ… အကယ်၍ သင်သည်စာရင်းဟောင်းတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းပါက၎င်းတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အကျိုးရှိသည်။ သင်၏စာရင်းတွင် ၁၀၀% တိကျမှန်ကန်မှုကိုဘယ်တော့မျှရနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ လူတို့သည်အလုပ်နှင့်ပံ့ပိုးသူများကိုမကြာခဏပြောင်းလဲတတ်ပြီး၊ သူတို့၏အီးမေးလိပ်စာဟောင်းများကိုစွန့်ပစ်ကြသည်။
ဤပံ့ပိုးပေးအများစုမှာလည်းတစ်ခုပူဇော် API ကို ဒါကိုမင်းရဲ့ဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ထဲကိုပေါင်းစည်းနိုင်အောင်။
ဝေဟင် - စီးပွားရေးအီးမေးလ်များနှင့်အလားအလာရှိသောဖုန်းနံပါတ်များကိုရှာပါ။ သူတို့မှာ chrome extension လည်းရှိတယ်။
ကောင်းပါတယ် သင်၏ဖောက်သည်ဒေတာဘေ့စ်များ၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများ (သို့) အွန်လိုင်းသတင်းလွှာများမှမမှန်ကန်သောအီးမေးလ်များကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ကောင်းကျိုးအတွက်သင်လိုအပ်သည် (ယခုတရားဝင်မှု၏အစိတ်အပိုင်း) ။ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုသင်အလွယ်တကူ drag and drop လုပ်နိုင်တယ်၊ ဖိုင်ကိုမိုးတိမ်ကနေတစ်ဆင့်ဝေမျှနိုင်သည်၊ ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏စာရင်းတွင်အသေးစိတ်အစီရင်ခံနိုင်သည်။ သူတို့ကအစရှိသည် API ကို မင်းတို့ရဲ့အီးမေးလ်အတည်ပြုချက်ကိုသူတို့နဲ့ပေါင်းစည်းချင်တယ်ဆိုရင်!
ရှင်းလင်းရေး - ဤကြီးမားသောအီးမေးလ်အတည်ပြုသူကသင့်အားအီးမေးလ်ဒေတာဘေ့စ်ကိုတင်ရန်နှင့်သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းနှင့်ရှင်းလင်းနိုင်စေသည်။
ဒီဘွန်း - DeBounce ၀ န်ဆောင်မှုကသင့်အားအီးမေးလ်လိပ်စာများစာရင်းကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
အီးမေးလ် Checker - သင့်အတွက်မမှန်ကန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာအတုများကိုဖော်ထုတ်သည်။
အီးမေးလ် Checker - (အထက်မှကွဲပြားမှု) အီးမေးလ်စစ်ဆေးသူသည်အီးမေးလ်စိစစ်ရေးကဏ္ within ၏မူလရှေ့ဆောင်များထဲမှဖြစ်ပြီး၊ အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုများတိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။
Experian ဒေတာအရည်အသွေး - အီးမေးလ်လိပ်စာမှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိနှင့်ချက်ချင်းဖော်ထုတ်နိုင်သောအီးမေးလ်စစ်ဆေးခြင်းအဖြေ။
နင် အီးမေးလ်အပေါ်မှီခိုနေသည့်ကုမ္ပဏီများအားသူတို့၏အီးမေးလ်စာရင်းများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်ခြင်း၊
အထင်ကြီးအချက်အလက်ထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းသည်မူဝါဒအခြေပြုစည်းကမ်းများနှင့်အီးမေးလ်အခြေပြုခြိမ်းခြောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်အလွှာပေါင်းများစွာသောချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုသည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့် algorithms များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
သတင်း - မလိုအပ်သောအချိန်၊ စွမ်းအင်နှင့်ငွေများမဖြည့်မီအီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့်ဒိုမိန်းများ၏မှန်ကန်မှုကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူအတည်ပြုပြီးအတည်ပြုခြင်းဖြင့်သင်၏သတင်းစကားကို ၉၀% တိုးစေနိုင်သည်။
Kickbox - Kickbox သည်သင်အမှန်တကယ်အသုံးပြုသူများထံသို့သာအီးမေးလ်များပေးပို့နိုင်ပြီးအရည်အသွေးနိမ့်သောလိပ်စာများကိုတန်ဖိုးမြင့်အဆက်အသွယ်များမှခွဲထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။ သင်၏ဂုဏ်သတင်းကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းသောနှုန်းထားများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Kickbox ဖြင့်ငွေစုခြင်း။
မေးလ် - အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စာရင်းသန့်ရှင်းရေးသည်အလွန်ခက်ခဲသောအရာများနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများမရှိဘဲမြန်ဆန်။ စိတ်ချရသောကိရိယာကိုလိုချင်သူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်၏စာရင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ရိုးရှင်းသောအဆင့် ၃ ဆင့်ပဲ။
သန်းကြွယ်သူဌေး - အီးမေးလ်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးနိုင်ပြီး၊
သက်သေအထောက်အထား - သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းများကိုလျင်မြန်စွာအတည်ပြုပြီးအတည်ပြုပါ။ EU-US Privacy Shield ကိုလိုက်နာသည်။
TheChecker - နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်မှကျွမ်းကျင်သူ ၁၀၀၀ သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အီးမေးလ်စာရင်းသန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအားကိုးနေရသည်။
TowerData - သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းအားမမှန်ကန်သောနှင့်လိမ်လည်လှည့်စားသောအီးမေးလ်လိပ်စာများအားရှင်းလင်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏စာအ ၀ င်အဝင်ပို့နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပါ။
နာမ် - သင်ခုန်ပေါက်လိမ့်မည်မဟုတ်သောအကောင့်တစ်ခုကိုအီးမေးလ်ပို့နေကြောင်းသင်သိပါ။ Xverify သည်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ဝက်ဘ် - အီးမေးလ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အချက်အလက်တိုးမြှင့်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု။
အခြားအီးမေးလ်စစ်ဆေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအွန်လိုင်း
အခြားအီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများဤတွင်ဖော်ပြထားသည် ယုံကြည်မှုညွှန်းကိန်းအားလုံးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ အထက်ကုမ္ပဏီများသည်။
Ampliz - Ampliz သည်သင်၏သုံးစွဲသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးပြီးသင့်အားတုန့်ပြန်မှုအများဆုံးနှုန်းကိုအီးမေးလ်သန့်ရှင်းရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ ဒီဒိုမိန်းကိုလည်းမှတ်ပုံတင်ထားပါသည် မင်္ဂလာပါ ဝန်ဆောင်မှု။ Bounceless သည်အတည်မပြုရသေးသောအီးမေးလ်များ၊ spam ထောင်ချောက်များနှင့်တစ်ခါသုံးဒိုမိန်းများကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းများကိုသန့်ရှင်းလိမ့်မည်။
ဗီဒီယိုဖိုင် သင်၏စာရင်းများကိုသန့်ရှင်းစွာထားရန် Disposable / ယာယီအီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ spam အီးမေးလ်များစသည်တို့ကိုဖယ်ရှားပေးရန်အီးမေးလ် Validation API ဝန်ဆောင်မှု။
Disposable အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပိတ်ဆို့ပါ - တစ်ခါသုံး၊ တခါတည်း၊ ယာယီအီးမေးလ်လိပ်စာတွေကိုရှာဖွေပြီးပိတ်ဆို့ပါ။
Bulk အီးမေးလ် Validator - အီးမေးလ်လိပ်စာမှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိအတုကိုစစ်ဆေးနိုင်သောဝက်ဘ် application တစ်ခု။ အီးမေးလ်များကိုပုံမှန်ပို့သူမည်သူမဆိုသည်စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှအကျိုးရှိနိုင်သည်။
CaptainVerify - သင်၏စာပို့စာရင်းများကိုလျင်မြန်စွာစစ်ဆေး။ ရှင်းလင်းပါ။ သင်၏ဖိုင်တွင်သင်၏ဖိုင်ကိုဆွဲချပါ၊ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပါ။ ရိုးရှင်းမြန်ဆန်လုံခြုံ။
မင်္ဂလာပါ - အီးမေးလ်များကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။
ဆက်သွယ်ရန် - မည်သူမဆို၏ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာပါ
DataValidation - သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းကိုမြန်ဆန်စွာစစ်ဆေးပါ။ ဆက်လက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စာရင်းပြုစုခြင်းများအတွက် MailChimp သို့မဟုတ် Constant Contact အကောင့်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
အီးမေးလ် - Emailmarker သည်တန်ဖိုးရှိသောအဆက်အသွယ်များမှအရည်အသွေးနိမ့်သောအီးမေးလ်များကိုစစ်ထုတ်ရန်ကူညီသည်။ သင့်ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုသူများထံအီးမေးလ်တစ်စောင်သာပို့ပေးပြီးသင်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ရန်၊ သင်၏အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့်အီးမေးလ်မာကေးရှင်းဖြင့်ငွေစုဆောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။
သန့်ရှင်းရေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်အတည်ပြုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းသွင်းသူများ၏ဒေတာဘေ့စ်များမှသူတို့သည်အကန့်အသတ်များ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ ဆန္ဒပြသူများ၊ တရားစွဲဆိုသူများနှင့်အခြားရနိုင်သောအရာများအားလုံးကိုဖယ်ရှားသည်။ eHygienics သည်အချိန်မှန်ပေးသည် API ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစာရင်းပေးသွင်းသူများကနေ့စဉ်အသုံးပြုသောပလက်ဖောင်းများ။
အီးမေးလ်အဖြေများ - သင်၏လက်ရှိအီးမေးလိပ်စာဒေတာဘေ့စ်အားပွတ်တိုက်ခြင်း၊
အီးမေးလ် - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စျေးကွက်သမားများနှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အီးမေးလ်ဖြင့်တရားဝင်အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှု
အီးမေးလ်စစ်ဆေးသူ - သင်၏စျေးကွက်စာရင်းမှမမှန်ကန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုရှင်းလင်းပြီးဖယ်ရှားပါ
အီးမေးလ်စာရင်း Verify - အတည်ပြုပြီးသောအီးမေးလ်စာရင်းသည်စျေးကွက်တွင်အပြည့်စုံဆုံးအီးမေးလ်အတည်ပြုသည့်အဖြေကိုပေးပြီးသင်၏အီးမေးလ်စာရင်းများသည်မြင့်မားသော ROI ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်အပြစ်ပေးမှုများမှကာကွယ်ပေးသည်။
YoYo အီးမေးလ်ပို့ပါ - ကျွမ်းကျင်သောအီးမေးလ် validation စာရင်းရှင်းလင်းဖြေရှင်းနည်းများ။
အီးမေးလ် Validator - Byteplant Real-Time Online Email Validator ဖြင့်သင်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုတည်ရှိပြီးမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုသင်အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ကလိမိုင် - Klemail သည်သင်ပို့သောအီးမေးလ်များတည်ရှိနေသည်ကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ဒိုမိန်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုကာကွယ်။ ပွင့်လင်းမှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပါ။
ListWise - ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်သန်းပေါင်းများစွာထက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အီးမေးလ်စာရင်း - သန့်ရှင်းရေးအင်ဂျင်အသစ်ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည့်သန်းပေါင်းရာနှင့်ချီသောအီးမေးလ်လိပ်စာများ၏ရလဒ်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ListWise II ကိုအခမဲ့ရယူပြီးသင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမြင့်ဆုံးသို့ယူဆောင်ပါ
မေးလ် - မေးလ်ဆာဗာနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးစာတိုက်ပုံးတည်ရှိမနေကိုစစ်ဆေးသည်
မေးလ် - လူမှုကွန်ယက်များ အသုံးပြု၍ အီးမေးလ်များနှင့်ဖုန်းများအားအတည်ပြုသည်
Mastersoft Group မှ - သြစတြေးလျအချက်အလက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်
အမြန်အီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်း - REST API ကို အသုံးပြု၍ အီးမေးလ်လိပ်စာအမြောက်အများကိုဖြစ်စေ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်စေကြောင်း web-based service တစ်ခု။ သူတို့သည်မမှန်ကန်သောအလုပ်များမဟုတ်သောအီးမေးလ်များကိုရှာဖွေပြီးသင့်အားအသေးစိတ်အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံပေးသည်။
SiftLogic - အီးမေးလ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရမှတ်စစ်ဆေးခြင်း inbox နေရာချထားခြင်းနှင့်ပေးပို့သူ၏ဂုဏ်သတင်းကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်။
Snovio - အဝေးရောက်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု - Snovio နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများကိုရှာဖွေ၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့်အီးမေးလ်အလားအလာ။
.ရာဝတီ - အီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်း။ လွယ်ကူမြန်ဆန်စျေးပေါ။ သင်၏စာပို့စာရင်းကိုသန့်ရှင်းစေပြီးသင်၏ပေးပို့နိုင်မှုနှုန်းကို ၉၉% အထိမြှင့်တင်ပါ။ အီးမေးလ်လိပ်စာအတည်ပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပါ
Verifalia Verifalia သည်အီးမေးလ်လိပ်စာများစာရင်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်အလွယ်တကူတင်ပို့နိုင်သည့်ကွန်ယက်အခြေပြုအီးမေးလ် validation ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထုတ်ဖော်: သင်၏ပံ့ပိုးသူများကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါး၏တွဲဖက်ချိတ်ဆက်မှုများကိုအသုံးပြုနေသည်။
Tags: အက်ဥပဒေ-တွင်Active Campaignမင်္ဂလာပါဝေဟင်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်သော -CrmAiva-LabsamplizautopilotAWeberBombBombရုတ်တရက်ခုန်လွှားမင်္ဂလာပါကောင်းပါတယ်Brontoကင်ပိန်းု့ကပ်ရေးကွမ်းခြံကုန်းမှတ်ချက်သန့်ရှင်းသောစာရင်းစာရင်းရှင်းလင်းပါကွမ်းခြံကုန်းClickFunnelsCognito ပုံစံများစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ရန်ConvertKitကွမ်းခြံကုန်းအချက်အလက်အတည်ပြုခြင်းDataValidationဒီအီးအေပို့ဆောင်ရေးတစ်ခါသုံးအီးမေးလ်တစ်ခါသုံးအီးမေးလ်လိပ်စာရှာဖွေခြင်းအစက်တစက်ကျသန့်ရှင်းရေးအီးမေးလိပ်စာအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအီးမေးလ်အဖြေများအီးမေးလ်စစ်ဆေးသူအီးမေးလ်သန့်ရှင်းရေး apiအီးမေးပို့နိုင်မှုအီးမေးလ်အီးမေးလ်သန့်ရှင်းရေးအီးမေးလ်စာရင်းအတည်ပြုရန်အီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်းအီးမေးလ်အတည်ပြုသူအီးမေးလ်အတည်ပြုအီးမေးလ်အတည်ပြု apiyoyo အီးမေးလ်အီးမေးလ်ပိုESPအတွေ့အကြုံFormdeskပုံစံနင်FulcrumgdprGetsitecontrolဂူဂဲလ်ပုံစံများHighrisehubspotမင်္ဂလာပါiContactIcontact-Proအထင်ကြီးInbox နေရာချထားမှုInsightlyInstapageအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးispJotFormjunk emailjunk အီးမေးလ်စစ်ထုတ်ခြင်းKickboxKickofflabsklemailစာရင်းသန့်ရှင်းရေးစာရင်းသန့်စင်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကိုစာရင်းပြုစုပါမင်းချစ်သူmailchimpမင်္ဂလာပါစာပို့စာပို့စျေးကြီးMoosendNocrmioခွေးရူးPowrဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်qasကွမ်းခြံကုန်းအမြန်အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုအမြန်ဆုံးရည်ညွှန်း - ရော့ခ်RFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321RFC 5322 RFC 2821RFC 6531ရောင်းသူပေးပို့သူဂုဏ်သတင်းSendgridရေတံခွန်Sendxsharpspringစိုင်းထီးဆိုင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နင်စပမ်းspam ထောင်ချောက်spam ထောင်ချောက်အီးမေးလ်လိပ်စာSparkPostသပိတ်မှောက်စစ်တမ်း - Anyplaceယာယီအီးမေးလ်လိပ်စာကံကြမ္မာမျှော်စင်ချစ်သူစံပယ်ဖြူunbounceအီးမေးလ်စာရင်းမှန်ကန်ကြောင်းပြverifaliaအီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုပါဒေါင်လိုက်တုံ့ပြန်မှုဒေါင်လိုက်vision6Wooboxwwooနာမ်zapierzendeskZoho CRMZoho ပုံစံများ
SEO ဒဏ္thာရီ - အဆင့်မြင့်တဲ့စာမျက်နှာကိုမင်း update လုပ်သင့်သလား
ဧပြီ 25, 2014 မှာ 10: 49 AM
ဂရိတ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် Doug ။ သို့သော်မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်
“ pinging” ကိုသာဆန့်ကျင်။ အီးမေးလ်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊
သင်၏စာရင်းရှိစျေးသည်အများစုကထောက်ပံ့ပေးသော (ဆိုလိုသည်မှာ SMTP စစ်ဆေးမှုများ) ။ SMTP စစ်ဆေးမှုသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသာထောက်ပံ့ပေးသည်
ဤရလဒ်သည် ISP များစွာသည်သူတို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်နေသဖြင့်လိုချင်စရာများစွာကျန်ရှိနေသည်
ဒီအလေ့အကျင့်တားရန်။ ထိုမှတပါး, တုံအီးမေးလ်၏ဘေးမဟုတ်ပါဘူး
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ပြproblemနာရှိသောအီးမေးလ်လိပ်စာများ (ဥပမာ spam ထောင်ချောက်များ၊
အကြီးစား spam တိုင်ကြားသူများ, အန္တရာယ်ရှိတဲ့လိပ်စာများစသည်တို့) သူတို့ရဲ့ဖိုင်တွေထဲမှာနှင့်အမှတ်တမဲ့
သန့်ရှင်းသောလိပ်စာများဖြစ်သည့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအမှားများသည် Spamhaus နှင့်များဖြစ်သည်
အခြား spam များကိုစစ်ထုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများသည် spam များကိုအမြန်ဆုံးနှင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်နိုင်သည်
ဝင်ငွေ, အီးမေးလ်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး, ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်
သင်၏ဒေတာဘေ့စ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးလိပ်စာများကိုရှင်းထုတ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု (ဥပမာ - ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်း၊ ခုံသမာဓိရုံး၊ စပမ်းတိုင်ကြားမှုများစသည်)၊ သမိုင်းဝင်
MX နှင့် SMTP စစ်ဆေးမှုများ၏မှတ်တမ်းနှင့် Real-time SMTP စစ်ဆေးမှုများ။
အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ပြားမှစတင်သည်။ volume နှင့်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်
(ဆိုလိုသည်မှာ 24x7x365) နှင့် manual ပါ ၀ င်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးသောစနစ်ဖြစ်သည်
သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှ ROI ကိုအနည်းဆုံးဖြင့်ရရှိသည်
ဘယ်လို 25% ၏အကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်
Fortune 100 ကုမ္ပဏီများသာမကထောင်နှင့်ချီသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများမှာကြီးမားသည်
8:2014 pm မှာအောက်တိုဘာ 2, 32
မင်္ဂလာပါ Doug နှင့် billkaplan,
မင်းလည်းတွေ့နိုင်တယ် http://www.mailboxvalidator.com အီးမေးလ်စာရင်းသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုသည်။
မတ်လ 20, 2015 မှာ 11: 55 pm တွင်
Webbula.com သည်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့်အတည်ပြုပေးသည်
မတ်လ 22, 2015 မှာ 3: 35 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Scotty ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်!
ဧပြီ 23, 2015 မှာ 4: 46 pm တွင်
အကြံပြုချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မည်သူမဆိုသူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်အချက်အလက်များဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ပိုမိုလေ့လာလိုပါကဤလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။ http://bit.ly/1Ka27Hh
26:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 19
, Doug မင်္ဂလာပါ
သငျသညျကြိုးစားခဲ့ဖူး http://www.bulkemailchecker.com ? သင်၏စာရင်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးရလဒ်များနှင့်စျေးနှုန်းနှင့်မရောင့်ရဲနိုင်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ရှာဖွေ။ Bulk Email Checker ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောအီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေခြင်းပြီးဆုံးပြီဟုရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်သည်။ ငါသူတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်ကတည်းကသုံးခဲ့ပြီးပြီ၊ မပျော်တော့ဘူး။ သူတို့ကိုရှာဖွေပြီးသင်ရှာဖွေမှုကိုလည်းရပ်တန့်နိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug ကြီးစွာသောတနင်္ဂနွေရှိသည်။
27:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 59
23:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 34 မှာ
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စာရင်းအားအတည်ပြုရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပြီးအခြားပံ့ပိုးသူများနှင့်သင်အဘယ်ကြောင့်မကျေနပ်မှုကိုရှာဖွေချင်သနည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဘာကြောင့်အခြားသူများကိုမကျေနပ်တာလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ Bulk Email Checker ကိုအခြားဆိုဒ်များအားလုံးမှာဘာကြောင့်ရွေးရတာလဲဆိုတာကိုသင်မျှဝေချင်ရင်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်နှင့်၎င်းကိုဖတ်ရှုသောအခြားသူများကိုများစွာကူညီလိမ့်မည်။ ငါစျေးနှုန်းများ Bulk အီးမေးလ် Checker ကိုအပေါ်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုငါသိ၏ပေမယ့်ငါသည်လည်းသူတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းငှါအခြားအရာတို့ကိုသိရန်လိုသည်။ တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
24:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 17 မှာ
ဟိုင်းဆီမွန်၊ ရှေးကျသောစာရင်းများအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရေးစာရင်းများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အန္တရာယ်များရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကအများစုအားစစ်ဆေးခြင်းမပြုရသေးသောအီးမေးလ်လိပ်စာများတင်သွင်းသည့်မည်သည့်ကုမ္ပဏီကိုမဆိုမလေးစားပါ။ ပြီးတော့အီးမေးလ်ကိုလက်ခံတဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကသင်၏အီးမေးလ်များကိုလုံးဝလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည် (သို့) အကယ်၍ ထိုအီးမေးလ်လိပ်စာတော်တော်များများကအီးမေးလ်ကို SPAM အဖြစ်ဖော်ပြလျှင်၊ ရလဒ်အနေနှင့်သက်ဆိုင်ရာအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုလှိမ့်လှစ်ရာတွင်စာရင်းစစ်ဆေးရန်ကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မှားယွင်းသောကိရိယာကိုအသုံးပြုပါက ISP မှပိတ်ဆို့ခံရခြင်းနှင့်သူတို့၏အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှမောင်းထုတ်ခံရခြင်းခံရနိုင်သည်။
1:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 27 မှာ
စာရင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !! မေးစရာရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ချင်ပါတယ် ၀ ယ်ရန်ကောင်းသောဆော့ဗ်ဝဲကိုအကြံပေးနိုင်ပါသလား။ ငါဝေးဝေးကံမကောင်းနှင့်အတူကြည့်ရှုကြပြီ။ ငါကတတ်နိုင်သမျှအလိုအလျောက်ချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စက်တင်ဘာ 2, 2015 မှာ 10: 40 AM
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ပါ၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှ API တစ်ခုရှိသည်သို့မဟုတ် White Label ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးပါသည်။ ၎င်းသည်ဖြေရှင်းနည်းကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
စက်တင်ဘာ 16, 2015 မှာ 3: 26 AM
ဒေတာဘေ့စ်မေးလ်လိပ်စာကိုစစ်ဆေးရန်ရိုးရိုးလေး၊ အဆင့်မြင့်ဆုံးအီးမေးလ်စစ်ဆေးသူ။ Proofy.io
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခု beta ကိုစမ်းသပ်နေပြီးဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့တုံ့ပြန်ချက်လိုအပ်ပါတယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်သင်ငွေအချို့ပေးနိုင်ပါသည်။
17:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 20 မှာ
13:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 35
မင်းရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုစမ်းကြည့်ဖို့မင်းရဲ့ဆိုက်ကိုပဲသွားတယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူး။ မည်သူမဆိုငါစာရင်းပေးသွင်းသူစာရင်းကိုအကောင့်မန်နေဂျာ (သို့) တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်မထိဘဲကိုယ့်ရဲ့ဆိုက်ကိုစာရင်းသွင်းသူများစာရင်းကိုတင်မည်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူများကိုမသိသောအရင်းအမြစ်သို့ပေးရုံသက်သက်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အလွန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
13:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 58
အကယ်၍ သင် Powered by Neverbounce ကိုနှိပ်ပါ။ သူတို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကို navigation bar တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
5:2015 pm မှာနိုဝင်ဘာ 7, 27
ဟေ့ဒေါက်ဂလပ် Verifalia ကိုသင်၏စာရင်းထဲတွင်မဖော်ပြထားပါကကျွန်ုပ်အနည်းငယ်အံ့သြမိပါသည် ၎င်းသည်ဥရောပရှိအကြီးမားဆုံးသောအီးမေးလ် validation ပေးသူများထဲမှတစ်ခုသာမက၎င်းတို့သည်လက်တင်အက္ခရာကိုမသုံးသောအီးမေးလ်လိပ်စာများအတွက်အထောက်အပံ့အပါအ ၀ င်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မျှကျွန်ုပ်မမြင်တွေ့ရသောထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းပေးသည်။ ဥပမာစင်ကာပူ၊ ဂျပန်နှင့်ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား) နှင့်ဖြတ်သန်းမှုများစွာရှိသည့်နက်ရှိုင်းသောစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုယာယီပြylနာများနှင့်စာတိုက်ပုံးများသို့မဟုတ်မဲဆန္ဒစာရင်းများမှမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်။ အဓိကပံ့ပိုးမှုပေးသောဘာသာစကားနှင့်ပလက်ဖောင်းများအတွက် software developer များနှင့်စာကြည့်တိုက်များအတွက် RESTful email validation API ကိုလည်းဖော်ထုတ်ပေးသည်။ သူတို့တွင်တစ်နေ့လျှင်အခမဲ့အီးမေးလ် validation ၁၂၅ ခုအထိပါသောအခမဲ့အစီအစဉ်ရှိသည်။
5:2015 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 7, 07
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Verifalia ကိုစာရင်းထဲထည့်ပြီးပါပြီ။
25:2015 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 56
နှင့်ဤ post ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မတ်လ 15, 2016 မှာ 4: 43 pm တွင်
ငါအီးမေးလ်စာရင်းစိစစ်အတည်ပြုဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးရန်ဒီဘလော့ဂ်အတွက်အကြံပြုချက်များအချို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါအဆုံးသတ် emaillistverify.com နှင့်အတူသွား, ငါသူတို့ပထမ ဦး ဆုံးစာရင်းတွင်အပေါ်သူတို့နှင့်အတူပျော်ရွှင်နေစဉ်, သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် run ဖို့ငါကြိုးစားခဲ့နောက်ဆက်တွဲစာရင်းပြeveryနာဖြစ်ခဲ့သည်, အများအားဖြင့်ငါစင်ကြယ်သောစာရင်းကို download လုပ်လို့မရဘူးသောကြောင့် နောက်မှအီးမေးလ်များ။ မည်သည့်အီးမေးလိပ်စာများသည်မှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိရှိနိုင်ပါကသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုမည့်အချက်ကားအဘယ်နည်း။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုသည်တုန့်ပြန်မှုနည်းပါးပြီး၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်များအားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
မတ်လ 15, 2016 မှာ 5: 55 pm တွင်
Neverbounce ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကံကောင်းထောက်မစွာပြုခဲ့ပြီးပြီ။ သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဧပြီ 23, 2016 မှာ 7: 41 AM
ဧပြီ 23, 2016 မှာ 8: 44 pm တွင်
ဧပြီ 25, 2016 မှာ 7: 34 AM
ကောင်းတဲ့ပို့စ်! GetResponse ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ပေါင်းစပ်နိုင်သလားဟုကျွန်ုပ်သာတွေးခဲ့သည်။
ဧပြီ 25, 2016 မှာ 7: 01 pm တွင်
Andrea ငါယုံတယ်။ ငါလုပ်ရန်နည်းလမ်းသင်၏အတည်ပြုကုမ္ပဏီ၏ API ကိုနှင့်သင်၏ပုံစံအလုပ်လုပ်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကို GetResponse သို့တွန်းပို့နိုင်သည်။
9:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 21
ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေပါတယ် https://www.emailverifierapi.com/ Fortune 500 ကုမ္ပဏီ၏အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအတည်ပြုရန်။ ကျွန်ုပ်၌တိုင်ကြားချက်မရှိပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးသည်ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအရည်အသွေးကိုပေးသောစျေးနှုန်းချိုသာသောရွေးချယ်မှုကိုရှာဖွေနေကြပါသည်။ သငျသညျကိုအသုံးပွုနိုငျသောအခြားစီးပွားရေးအဆင့်အဆင့် api အကြံပြုနိုင်ပါသလား? သော့ချက်စာလုံးဖြစ်ခြင်း "လုပ်ငန်းအဆင့်" ။ အကူအညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
12:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 58
မင်းတို့ကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်၊ ​​မင်းကိုမွမ်းမံဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ငါတို့အီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်နေတယ်။
မင်းပိုက်ဆံအများကြီးမဖြုန်းတီးရဘူး ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြန်ကြားရန်ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်မှုထက်ပိုပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။
အီးမေးလ်များကိုအတည်ပြုလိုသောဖောက်သည်များထံမှစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ ထို့နောက် reception ည့်ကြိုကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေမန်နေဂျာကိုခေါ်ပြီးသူတို့၏သက်တမ်းရှိအီးမေးလ်များကိုစုဆောင်းသည်။
၁၅ ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့က Eblast ကိုလုပ်တဲ့အီးမေးလ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစစ်ဆေးပါတယ်။
25:2016 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 26
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ proofy.io ကိုသုံးပြီးအဲဒါကိုသဘောကျတယ် စျေးနှုန်းပညာရှိသူကအခြားသူများသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးနှင့်မြန်နှုန်းလည်းနည်းသည်။
25:2016 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 47
ဒီဇင်ဘာ 2, 2016 မှာ 4: 37 AM
Proofy.io သည်လိမ်လည်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ငါစစ်ဆေးမှုပေါင်း ၁၀၀၀၀ အတွက်ငွေပေးချေပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ် ၄၀၀၀ စာရင်းကိုတင်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်က“ ထုတ်ယူခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ရှိ Live Help နှင့်ကျွန်ုပ်အွန်လိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံး၊ ဂူဂဲလ်မှတစ်ဆင့်လူတစ်ယောက်မှလာသည် ရောမ (ထို site ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်သူ) နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေအန်နာကိုခေါ်။ အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကျွန်ုပ်ကိုမတွေ့ပါ။ ၎င်းတို့သည်ယခုလုံးဝအသံတိတ်နေသောကြောင့်သူတို့ကိုငွေမပေးသင့်ပါ။ သူတို့က“ ဆာဗာတွင်အလုပ်လုပ်နေသောပရိုဂရမ်မာ” အကြောင်းတစ်ခုခုပြောခဲ့ကြသော်လည်းထိုအချိန်ကတည်းကဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပိုက်ဆံပြန်မပေးတော့ပါ။ proofy.io မသုံးပါနှင့်။
20:2016 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 00 တွင်
ဇန်နဝါရီ 9, 2017 မှာ 5: 58 AM
ဇန်နဝါရီ 9, 2017 မှာ 11: 30 AM
လူတွေဟာအီးမေးလ်များကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးအီးမေးလ်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှတရားဝင်အတည်ပြုချက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ အကောင်းဆုံးမှာအီးမေးလ်လိပ်စာအပြောင်းအလဲများကိုဖမ်းယူရန်ကြိုးစားသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏စာရင်းကိုယင်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ ဖျက်နိုင်သည်။
11:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 07
သင်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးမပြုခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏စာရင်းများပိုမိုအသုံးဝင်စေရန်နှင့်သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များကိုလေ့လာရန်အတွက်မကြာခဏအလုံအလောက်မသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ (လူတိုင်း) ကမကြာခဏအီးမေးလ်ပို့သင့်တယ်။
သို့သော်ကိရိယာများ၏စာရင်း ... ကြောက်မက်ဘွယ်!
11:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 09
အော်ဘား၏ Neverbounce ၏စီအီးအိုနှင့်ကြီးစွာသော podcast အင်တာဗျူးတစ်ခုဖြင့်ဤစာမူကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ!
ဇန်နဝါရီ 20, 2017 မှာ 3: 20 AM
မင်းရဲ့ acc ဖန်တီးပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုရန်နည်းလမ်းမရှိဘူးထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ပထမအဆင့်မှာသင့်ရဲ့ acc ကိုဖန်တီးတဲ့အခါဒါကိုလုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
မတ်လ 28, 2017 မှာ 11: 55 AM
Awsome ဆောင်းပါး။ သငျသညျ Neverbounce, အော်စကာ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်အတူ Webinar ကို run လျှင်ငါသိနိုင်သလား?
ဧပြီ 24, 2017 မှာ 4: 47 pm တွင်
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်သည့်ဖောက်သည်အသစ်လာရောက်သည့်အခါအီးမေးလ်လိပ်စာကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲ / နည်းပညာကငါ့ရဲ့လက်ရှိဆော့ဗ်ဝဲထဲထည့်လို့ရလား။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရဲ့လက်ရှိဆော့ဗ်ဝဲအားလုံးကိုပြောင်းဖို့လိုမလား။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များ၏အီးမေးလ်လိပ်စာမှားယွင်းစွာသို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူသူအနေဖြင့်လည်းမှားယွင်းစွာစာရိုက်နေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ပြproblemနာရှိသည်။ ၀ ယ်တဲ့နေရာမှာစာရင်းရှင်းမယ့်အစားအီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖောက်သည်ဆီရောက်မယ့်အစားပိတ်ထားချင်တယ်။
29:2017 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 24
မင်းက real-time အီးမေးလ်အတည်ပြုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ emailchecker.com ရှိယောက်ျားများကိုစကားပြောပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြေရှင်းချက်နှင့်၎င်း၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
ဇွန် 27, 2017 မှာ 10: 36 pm တွင်
ဟိုင်းဒေါက်ဂလပ် မင်းကစားသမားကြီးကိုလွတ်သွားပြီလို့ခံစားရတယ် http://www.emailverifierapp.com ကျေးဇူးပြုပြီးထွက်ကြည့်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
29:2017 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 22
ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါး Doug သည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အလွန်ကောင်းသည့်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး ဆောင် ဦး ရွက်ပြုကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ဖောက်သည်များအတွက်စာမျက်နှာများစွာညှပ်ထားကာတစ်နေ့အီးမေးလ်ထောင်ဂဏန်းအနည်းငယ်ကောက်ယူနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသူတို့စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Email Checker လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆီကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဟာအတိကျဆုံးနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ API ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ squeeze စာမျက်နှာများနှင့်၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းတို့သည်အမြောက်အများစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးသည်၊ အချိန်ကိုအသုံးပြုသော form time ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုကြသော်လည်းနေ့စဉ် API ကိုကြီးမားသောရလဒ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့မှာအတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေချင်တယ်၊ ငါပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ emailchecker မှာယောက်ျားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကကြွေးကြော်သံပေးပါ။ http://www.emailchecker.com ယောဟနျသ Morgan သငျသညျ sent ကိုစေလွှတ်သူတို့ကိုပြောပြပါ
15:2017 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 14
ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်သင်အတည်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းအကြားခြားနားချက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို emailchecker.com ကိုထည့်လို့ရလား။
27:2017 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 39
28:2018 pm တွင်အောက်တိုဘာ 12, 53
ဒီဇင်ဘာ 10, 2018 မှာ 7: 59 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, DeBounce ထည့်ပြီးပါပြီ
3:2019 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 00 တွင်
အီးမေးလ်အတည်ပြုရန်အတွက်နောက်ထပ်အက်ပ်တစ်ခုကိုအကြံပြုလိုသည် - https://mailcheck.co
၎င်းတို့သည်မေးလ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလူမှုရေးပရိုဖိုင်းများကိုပိုမိုရည်ညွှန်းပြီးတိုက်ရိုက် smtp စစ်ဆေးမှုများကိုသာပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် info များကိုပိုမိုရရှိရန်နှင့် gravatar, gmail စသည့်အီးမေးလ်ပိုင်ရှင်သည်ဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
5:2019 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 56 တွင်
သြဂုတ် 6, 2019 မှာ 10: 18 AM
ဒီစာရင်းထဲကိုတစ်ခုထက်ပိုတဲ့ tool တစ်ခုထည့်လို့ရမလား။
TrueMail (https://truemail.io/) အီးမေးလ်အတည်ပြုတဲ့ကိရိယာကောင်းတခုဖြစ်တယ်။
၎င်းသည်အလွန်တိကျပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ သင်၏စာရင်းအားမမှန်ကန်သော၊ အန္တရာယ်ရှိသောအီးမေးလ်လိပ်စာများမှလျင်မြန်စွာရှင်းလင်းလိမ့်မည်။
စကားမစပ်၊ လစဉ်လတိုင်းမှာအခမဲ့အီးမေးလ်စစ်ဆေးမှု ၁၀၀၀ ရှိတယ်။
6:2019 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 07
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Alona! သူတို့နိုင်ငံကိုပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ whois ဒေတာကိုသီးသန့်ထားရှိလို့သူတို့ကိုငါအခြားစာရင်းထဲထည့်လိုက်တယ်။
မေလ 24, 2020 မှာ 5: 50 pm တွင်
ဒီအခမဲ့စိစစ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်အီးမေးလ်များကိုလည်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ https://www.emailverified.org
14:2020 pm မှာနိုဝင်ဘာ 5, 06
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအသစ်များနှင့်ဆောင်းပါးကိုနောက်ဆုံးသတင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပုံသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ငါစာရင်းထဲထည့်သွင်းခံရဖို့အန်တိုနီယိုအကြံပြုချင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ထွက်ရှိအဲဒီမှာစျေးအသက်သာဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကို။ တစ်လလျှင် validation စစ်ဆေးမှုပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကမ်းလှမ်းသော free tier သည်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်လုံလောက်သည်။ ထို့ကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှု (www.antideo.com) ကိုကြည့်ပြီးသင်ကြည့်ပါကသင့်စာရင်းထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထည့်သွင်းပါကအလွန်ကျေးဇူးတင်မည်။ fit ။
18:2020 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 41
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါစာရင်းထဲထည့်လိုက်ပြီ။ တစ်ခုသတိပြုရမည့်အချက်မှာသင်၏မိဘကုမ္ပဏီ၏ဆိုက်သည်ပျက်နေပုံရသည်။